Wasiiro iyo masuuliyiin heer gobol ilaa rugta ganacsiga ee Puntland oo tegaya Denmark (Dhegeyso) – Radio Daljir
Seteembar 22, 2013 6:02 b 0
Nairobi, September 22, 2013 – Dhowaan dalka Denmark waxaa la filayaa in ay gaaraan wefdi ka socda Puntland oo isugu jira wasiirada waxbarashada iyo haweenka, sidoo kale waxaa ku jira gudoomiyaha gobolka Mudug Maxamed Yuusuf Jaamac (Tigey) iyo xubno ka socda rugta ganacsiga ee Puntland.
Xubnaha isugu jira wasiiradda iyo masuuliyiinta kale ee dowladda ayaa la filayaa in ay halkaas kula kulmi doonaan masuuliyiin ka tirsan Denmark, iyagoo booqan doona qaar ka mid ah xaruumaha dowladda weliba hoolka Baarlamanka ee dalkaas.
Wefdiga casuumada ka helay Denmark ayaa sidoo kale la kulmi doona jaaliyadda reer Puntland ee ku nool qaar ka mid ah magaalooyinka dalkaas, iyadoo kala hadli doonaan sidii la isugu xiri lahaa qurba-joogta iyo gudaha, waxaa kaloo jaaliydda warbixinno ku aadan xaalada dadka ay u soo gudbin doonaan masuuliyiinta Puntland.
Gudoomiyaha gobolka Mudug Maxamed yuusuf Jaamac (Tigey) oo ka mid ah wefdiga booqanaya Denmark oo haatan jooga magaalada Nairobi ee dalka Kenya, ayaa sheegay in uu socdo diyaar garow balaaran oo ay wefdigu ugu jiraan sidii ugu amba bixi lahaayeen Denmark.
DHEGEYSO: Cabdirisaaq Silver oo daljir ka tirsan ayaa waraystay gudoomiye Tigey oo Nairobi jooga